Kachin Archives - Kachin News Group (KNG) ,
လူသတျမှုနှငျ့ စဈရာဇဝတျမှုမြားကို အာဏာသိမျးစဈတပျက ဆကျလကျကြူးလှနျနဟေု ကခငျြအမြိုးသမီးအဖှဲ့ ထောကျပွ
စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး မွို့ပျေါ ဆန်ဒဖျောထုတျမှုမြားတှငျ စဈတပျက လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျနသေလို ကခငျြရှတေ့နျးစဈမွပွေငျတှငျလညျး စဈရာဇဝတျမှု ဆကျတိုကျ ကြူးလှနျနကွေောငျး ကခငျြအမြိုးသမီးအဖှဲ့ (KWAT) က ပွောသညျ။
နှဈဖကျ bilateral အပဈအခတျရပျစဲရေး ဆှေးနှေးနဆေဲကာလမှာ တိုကျပှဲဖွဈပှါးမှု မရှိသလကျေဖွဈနသေော ကခငျြပွညျနယျမှာ မွနျမာ အစိုးရတပျ နှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA ကွား ဇှနျလ (၂၉)ရကျ၊ တနင်ျလာနေ့ က ကခငျြပွညျနယျအလယျပိုငျးမှာ တိုကျပှဲဖွဈပှားလာသညျဟုသိရသညျ။
ယမနျနေ့ ည နှဈဖကျတိုကျပှဲ ဖွဈပှားသညျ့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့နယျအတှငျး ယနေ့ ဇှနျ (၇)ရကျ တနင်ျဂနှနေေ့ မိုး စလငျးခြိနျမှ မွနျမာအစိုးရတပျ နှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျာ (KIA) ကွား တိုကျပှဲ ဒုတိယနေ့ ပွနျလညျဖွဈပှားနကွေောငျး KIA ကဆိုပါသညျ။ စနနေေ့ ည တိုကျပှဲ ဖွဈပှားခဲ့သော KIA တပျမဟာ (၆) လကျအောကျခံ တပျရငျး (၉) တပျဖှဲ့မြားရှိနသေောနရော Htan Hpa…
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု မြန်မာနိုင်ငံကို ICC နှင့် ICJ ခေါ် နိုင်ငံတကာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံးများမှ အရေးယူ ကြားနာစစ်ဆေးမှု စတင်လုပ်ဆောင်လာခြင်းပေါ် မိမိတို့ သုံးဖွဲ့က ‘အပြည့်အ၀ထောက်ခံကြောင်း’ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်အား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန် တရုတ်အစိုးရမှ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ခေါင်းဆောင်များကို လူတွေ့ ဖိအားပေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်နေ့ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တရုတ်–မြန်မာနယ်စပ် မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (NDAA) ဌာနချုပ် မုန်းလားသို့ တရုတ်အစိုးရ…
မြန်မာအစိုးရ နှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် (၄)ဖွဲ့ တို့ ယခုလအတွင်း တွေ့ဆုံမည့် နေရာ အတွက် ဆက်လက် ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုအတွက် ကြားဝင် ကူညီပေးသော ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်များ ဆိုပါသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး (bilateral ceasefire) ကိစ္စ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည့် ‘နေရာ နှင့် နေ့ရက်’ အတွက် နှစ်ဖက် ဆွေးနွေးနေဆဲ အခြေအနေဖြစ်ပြီး ယခုချိန်အထိ မသိရသေးကြောင်း မြစ်ကြီးနားအခြေစိုက် ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG (Peace-talk…
ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဌ Rev. Dr. Hkalam Samson အား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေဖြင့် တပ်မတော်မှ တရားစွဲဆိုရန် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးမှာ ဦးတိုက်လျှောက်ထားမှု ကို စက်တင်ဘာ (၉)ရက် ယနေ့ ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းသွားကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာစစ်တပ် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မပခ) ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သန်းထိုက် က တရားလိုပြုကာ Rev. Dr. Hkalam Samson ကို အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့်တွေ့ဆုံစဉ်…